04 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: သြဂုတ်လ42019
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းမှအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir အကြားခရီးသွားအချိန်5နာရီန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan တို့ကဖွင့်လှစ်သည်ယနေ့ကျင်းပခဲ့သည်နာရီ 3.5 192 ကီလိုမီတာ segment ကို, ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ဒီပိုက်ဆံသုံးစွဲဖို့ဒါနညျးလမျးမြားစှာ? ကားများအဘို့အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်သည့်မြူနီစီပယ်၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် Sprint အပြေးပြိုင်ပွဲ ETU ဘော်လကန်ချန်ပီယံရှစ် 2019 အတွက်ပြိုင်ကား၏ပထမဆုံးနေ့ပြီးစီးခဲ့ပြီ။ ကြယ်လူငယ်နှင့် 12 တူရကီအားကစားသမားဆုတံဆိပ်အနိုင်ရခဲ့သည့်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲအတွက်အထက်တန်းလွှာအားကစားသမား။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IBB) ကအပြေးပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ချုပ်တူရကီ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းဖွင့်လှစ်! : အစ္စတန်ဘူလ် Izmir ကားလမ်းမှအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Izmir အကြားခရီးသွားအချိန် 8,5 နာရီနာရီ 3,5 192 ကီလိုမီတာ segment ကိုလျှော့ချမည်, နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်အားဖြင့်4သြဂုတ်လ xnumx't န်ဆောင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ41871 တိတ်ပထမဦးဆုံးမီးရထားကြိုးစားခဲ့
ယနေ့တွင်သမိုင်းသြဂုတ်လ41871 States မှာပထမဦးဆုံးမီးရထားလမ်း Haydarpasa-Izmit ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူတို့ကသြဂုတ်လ41895-Afyon (74 ကီလိုမီတာ) လိုင်းအတွက်ပြိုကျဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါလိုင်းဒီဇင်ဘာလ 31 1928 အပေါ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အခြို့သောဒိုင်းနမိုက်နှင့်အတူသြဂုတ်41903 ဘူဂေးရီးယားအကြမ်းဖက်သမားတွေ [ပို ... ]